बि’चरा ! २० बर्षे युवतीले गरिन यस्तो काम, स्वर सुन्दा सबै छक्क परे, खोलाको ढुङ्गा बेचेर परिवार पाल्छिन (भिडियो सहित):: Mero Desh
बि’चरा ! २० बर्षे युवतीले गरिन यस्तो काम, स्वर सुन्दा सबै छक्क परे, खोलाको ढुङ्गा बेचेर परिवार पाल्छिन (भिडियो सहित)
Published on: १ बैशाख २०७८, बुधबार ०५:३०
“झापा । एक गरिब परिवारमा जन्मिएकी रोदा राई जस को आवाजमा छुट्टै किसिमको जा’दु सु’निन्छ । पहाडको एक लास अनि खोलाको नजिकैमा उनको घर रहेको छ । घर को आर्थिक अ’वस्था एक’दमै नाजु’क रहेको परिवार मा बि’चरा कलिलै उमेरमा सम्पुर्ण जिम्मेवारी बोकेकी रोदा राईले निकै मीठो गित गाउछिन ।
“उनले गाएको गित सुनेर सबै च’कित हुन्छन । जा’दुमय स्वर’की ध’नी रोदा’ले बिहानैदेखि खोलाभित्रको ढुङ्गा निकालेर एक ठाउमा भेला गरेर थुपारेर बिक्री गरेर घर परिवार र आमाबुबा पाल्छिन । आज सुपर अनलाइन टिभीको टिम उनले ढुङ्गा टिप्ने काम गर्दै गरेको खोलामै पुगेर केहि कुराकानी अनि उनको प्रतिभा युटुबमा सुपर अनलाइन टिभिमा राखेको छ ।
“सुपर अनलाइन टिभिका प्रस्तोता समीर सुवेदी ले गरेको कुराकानीमा रोदाले आफ्ना दुख सुख अनि सम्पुर्ण कथा सुनाइन । उनका बुबाले आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण आफुले छोरिको गायिका बन्ने सपना पूरा गर्न नस केको बताउदै आँसु झारेका थिए ।
“उनलाई सल्लाह सुझाब अनि केहि सहयोग गर्न चाहनेले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । बोल्दा बोल्दै एक्कासि रुन थालेकी रोदाले मनै छुने गितहरु एकपछी अर्को गर्दै यसरी सुनाइन । तलको भिडियोमा हेर्नुहोला आँ’सु आउनेछ ।
यो पनि,,नेपाली टोपी ढल्काउँदै मोदीले भने- ‘नदिने बजुले आइतबार पनि बार्छे’
‘काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखा न टुक्कायुक्त भाषणका निम्ति प्र’ख्यात छन् । विपक्षीलाई उखानटुक्काले हानेर घायल बनाउने ओलीको शैली अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पछ्याएका छन् ।
‘भारतका नेपालीभाषी समूदायलाई प्रभावमा लिन मोदी ले एक कार्यक्रममा नेपाली टोपी शिर मा ढल्काए । अनि, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेचनर्जीलाई नेपाली उखानमार्फत कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘नदिने बजुले आइ -तबार पनि बार्छे ।’
‘त्यसलाई मोदीले यसरी अथ्र्याए :‘जसले तपाईं लाई राम्रो कुरा दिन सक्दैन, ऊ केवल बहानाको खोजी गर्छ । दिदी (बेनर्जी) लाई १० वर्ष तपाईं हरुले पूरा शक्ति दिनुभयो । तर, दिदीले के दिइन् ?
‘पर्चापट्टा दिइन् ? चिया बगानमा मजदुरी दिइन् ? प्रवासी हरुलाई फरेन राइट्स एक्ट लागू गरिन् ? पहाडका विद्यार्थी लाई सुविधा दिइन् ? अहँ, दिदीले केवल अभाव र भे’दभा’ व दिइन् ।’
‘उनले थपे, ‘लकडाउनका समय केन्द्र सरकारले निशूल्क चामल र चना पठाएको थियो, त्यसलाई पनि त्रिणमूलका तौलावाजले लुटे । मैले पठाए को चामल पठाएँ, त्यो तपाईं लाई राम्रो लागेको थियो कि थिएन ?
‘त्यसमा पनि दिदीले गरिब, दलित, आ’दिवासी, पिछडावर्ग कसैलाई पनि उनीहरुको जायज हक दिइनन् । दिदीले घर मा ढल दिइनन् । खेतमा सिचाइको पानी दि’इनन् । तर, यहाँ का नदिलाई मा’फियाको हवाला गरिदिइन् ।’